एकल ह्यान्डल बाथरूम नल मैट कालो
घर / बाथरूमको नल / एकल ह्यान्डल बाथरूम नल / WOWOW एकल ह्यान्डल बाथरूम नल मैट कालो
wowowfaucet परिवारहरूको लागि उच्च गुणवत्ता र व्यावहारिक लागत प्रभावी उत्पादनहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ, गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न गुणवत्ता कडाई नियन्त्रण, र यदि तपाइँसँग प्रयोगको समयमा कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया तपाइँको प्रश्नहरूको उत्तर दिन ग्राहक सेवा सम्पर्क गर्नुहोस्।
2320700B स्थापना निर्देशन
कालो म्याट बाथरूम नल 2320700B
तपाईको बाथरूममा सम्पूर्ण उत्थान दिन एक सुरुचिपूर्ण कालो म्याट बाथरूम नल खोज्दै हुनुहुन्छ? अब खोज्नुहोस्! WOWOW ले तपाईंलाई पैसाको लागि उत्तम मान प्रस्ताव गर्दछ जब तपाईं आफ्नो बाथरूममा पूर्ण स्टाइलिश लुक दिन कालो म्याट बाथरूम नल खोज्दै हुनुहुन्छ। जब तपाईं बाथरूमको डिजाईन वा पुन: डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंले बुद्धिमानीसाथ तपाईंको बाथरूमको नल छान्नु पर्छ। सबै भन्दा पहिले, तपाइँको बाथरूम डिजाइन सामने मा सामंजस्यपूर्ण फिट गर्न को लागी। निश्चित रूपमा तपाइँ पहिले नै तपाइँको बाथरूम डिजाइन मा तपाइँको बाथरूम faucets शामिल गर्नुपर्छ। र दोस्रो, तपाइँले तपाइँको बाथरूमको नलबाट बच्नु पर्छ तपाइँको बाथरूमको बजेटको समाप्ति प्रविष्टि, किनकि धेरै बाथरूम डिजाइनहरूमा नल समावेश हुँदैन।
जहाँसम्म, WOWOW ले तपाईंलाई उत्कृष्ट गुणवत्ताको यो कालो म्याट बाथरूम नल किन्नको लागि अवसर प्रदान गर्दछ, र तपाईंको बाथरूमलाई तपाईंले खोजिरहनुभएको सुरुचिपूर्ण शैली दिन स्टाइलिश टचको साथ। र अझै, एक उत्कृष्ट मूल्यमा जुन ए-ब्रान्डको बाथरूम faucets को एक अंश मात्र हो। WOWOW को बाथरूम faucets को क्वालिटी तथापि केहि A- ब्रान्डको प्रस्ताव भन्दा राम्रो छ। यसैले WOWOW विश्वस्त छ कि हामी हाम्रो बाथरूम फालको साथ र विशेष गरी यो कालो म्याट बाथरूम नलको साथ पैसाको लागि उत्तम मूल्य प्रस्ताव गर्दछौं।
गुणस्तर कालो मैट बाथरूम नल
बताए अनुसार, WOWOW तपाईंलाई पैसाको लागि सबै भन्दा राम्रो मूल्य प्रस्ताव गर्न प्रयास गर्दछ। यो कालो म्याट बाथरूम नल निश्चित रूपले तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने उत्तम सम्झौता हो जब तपाई बाथरूमको नलको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। प्रोसेसिंग टेक्नोलोजी पूर्णताको लागि प्रयास गर्न डिजाइन गरिएको हो। यस तरिकाले WOWOW ले तपाईंलाई अझ राम्रो, प्रयोगात्मक र सबै लागत प्रभावी बाथरूम faucets प्रदान गर्दछ। उत्कृष्ट बाथरूम फालहरू जुन तपाईंको जीवनको गुणस्तर बढाउछ, तपाईंको जीवनलाई बढी सहज बनाउन।
यो राम्रो शिल्प कौशल तपाईले तुरून्त याद गर्नु हुनेछ जब तपाई यो बाथरूमको नल आफ्नो हातमा समात्नुहुन्छ। यस कालो म्याट बाथरूमको नलका लागि प्रयोग गरिएको गुणवत्ता सामग्रीहरू चरम उच्च गुणवत्ताका छन्। जिंक जस्ता धातु र ठोस काँसा जस्ता सामग्रीले लामो जीवन धैर्यको ग्यारेन्टी गर्दछ। यसको अलावा, ड्रिप मुक्त NSF- प्रमाणित कारतूस एक लामो चिरस्थायी उत्पादन पनि हो। यसको नवीन aerator को साथ तपाईं एक विरोधी स्प्लेटर पानी प्रवाह को सुनिश्चित हुनुहुन्छ। र तपाईं कालो म्याट बाथरूम नलको यस आर्थिककरण सुविधाको साथ पानीको %०% बचत गर्नुहोस्। यस aerator सजिलै हटाउन सकिन्छ कुनै उपकरणको प्रयोग बिना यसलाई सफा गर्न वा प्रतिस्थापन गर्न।
केन्द्रित कालो मैट बाथरूम नल
कालो म्याटमा केन्द्रसेट बाथरूम नल inch इन्च-होल स्थापनाको लागि बनाईएको हो। कालो म्याट बाथरूम नल उपकरण र स्थापना उपकरणहरूको पूरा सेटको साथ आउँदछ। WOWOW ले उदाहरणका लागि आफैंले स्थापनाको लागि व्यावहारिक ग्लोभहरू बारे पनि सोच्दछ तपाईंको हातलाई हानी नगरीकन। तपाईले सजिलैसँग यो कालो म्याट बाथरूम नल स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ २० मिनेट भित्र कुनै महँगो प्लम्बरको आवश्यकता बिना नै। यदि तपाईंलाई थप आपूर्ति लाइनहरू आवश्यक छ भने, यी एकै पटकमा तपाईंको बाथरूमको नल स्थापना पूरा गर्न छुट्टै बेचिन्छ।
कालो म्याट बाथरूम नल एक लिफ्ट रॉड ड्रेन स्टापरको साथ आउँदछ। यो असम्भव लिफ्ट रडले पानीलाई राम्रोसँग निकाल्न सक्छ, तपाईंको हातहरू चुहावट बेवास्ता गर्दै। पानी सजीलो बग्यो र कुनै चिन्ताजनक आवाज बिना। केवल एक साधारण हात आन्दोलनको साथ तपाईं खोल्न सक्नुहुन्छ वा खोल्ने स्ट्यापर बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, ड्रेन स्टापरलाई एस्थेटिक्समा सम्झौता नगरी राम्रोसँग कालो मैट बाथरूम नलमा एकीकृत गरिन्छ। तपाईले यस्तो हेडललाई मुश्किलले हेर्नुभयो जुन राम्ररी र आरामसँग कालो म्याट बाथरूम नलको पछाडि राखिएको छ।
स्टाइलिश कालो म्याट बाथरूम नल
यस बाथरूम नलको सुरुचिपूर्ण कालो म्याट रंगले कुनै पनि बाथरूममा स्टाइलिश थप प्रदान गर्दछ। बाथरूम faucets अक्सर एक बिट को कम तिनीहरूको आकार को कारण अनुमान गरिएको छ। जे होस्, ती तपाईंको बाथरूम सजावट मा एक ठूलो प्रभाव छ। अनौंठो कालो उपस्थिति पक्कै पनि आफूलाई सामान्य ब्रश निकल वा क्रोम सतहबाट टाढा राख्छ। यो आधुनिक lavtory सजावट शैली बृद्धि गर्न, एक अधिक आधुनिक भावना दिन्छ। यो म्याट कालो सतहको अर्को फाइदा यो हो कि यसलाई सफा गर्न र मर्मत गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ। तपाईं कालो म्याट बाथरूम नलमा कुनै पनि फोहोर औंठा प्रिन्टहरू देख्नुहुने छैन।
कालो म्याट बाथरूमको नलको एक ह्याण्डलको साथ, तपाईं निश्चित रूपमा पानीको मात्रा र तापक्रम एक हातले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरीकाले तपाईले दुई बिभिन्न ह्याण्डलहरू प्रयोग गर्नुपर्दैन, र तपाईलाई ठीक एक हातले पानी नियन्त्रण गर्न अनुमति दिनेछ। तपाईं आफ्नो दायाँ ब्रश वा आफ्नो अनुहार कुल्चन जस्ता अन्य कार्यहरूको लागि तपाईंको अर्को हात निःशुल्क हुनेछ। नतिजा स्वरूप, कालो म्याट बाथरूम नल धेरै संक्षिप्त रूपमा छ तपाईंको बाथरूममा उपयोगी ठाउँ लिनको लागि। त्यसकारण कालो म्याट बाथरूमको नल कुनै पनि आधुनिक बाथरूममा वास्तविक थप हो।
ग्यारेन्टी कालो मैट बाथरूम नल
WOWOW मा हामी हामी प्रदान गर्छौं गुणवत्ता संग विश्वस्त छौं। हामी विश्वस्त छौं कि हामी पैसाको लागि उत्तम मूल्य प्रस्ताव गर्दछौं तपाईले बजारमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो गुणस्तर धेरै A- ब्रान्डहरू द्वारा अपराधिक छ। नतिजा स्वरूप, धेरै ए-ब्रान्डले केवल १ बर्षे वारंटी अवधि प्रदान गर्दछ। हामी तपाईंलाई चुहावट, ड्रिप्स, भिन्न, र दोषहरू बिरूद्ध पूर्ण-बर्षे वारंटी दिन डराउँदैनौं। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, हामी हाम्रो जिम्मेवारी लिन्छौं। यस तरिकाले तपाईलाई कुनै जोखिम बिना निरन्तर पानी आपूर्तिको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। हामी जोखिम पूर्ण रूपमा लिन्छौं, र यदि तपाईंको बाथरूमको नलले यो कार्य नगरेको खण्डमा हामी खुशीसाथ तपाईंको कालो म्याट बाथरूमको नललाई ब्रान्ड नयाँसँग बदल्नेछौं। यो तपाईं को लागि हाम्रो प्रतिज्ञा हो।
अन्तिम तर कम्तिमा होइन, हामी तपाईंलाईa०-दिनको पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टी पनि प्रदान गर्दछौं। यदि तपाईं आफ्नो कालो म्याट बाथरूमको नलबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने, हामी तपाईंलाई तुरून्त पूर्ण फिर्ती दिनेछौं। यसले हाम्रो उत्पादनमा हाम्रो विश्वास प्रमाणित गर्दछ। दुबै उपभोक्ताहरू र व्यवसाय, ग्लोबल ग्राहकहरूको बढ्दो संख्या, हाम्रो faucets मा विश्वास, र कुनै कारण बिना। हामी पैसाको लागि उत्तम मूल्य प्रस्ताव गर्दछौं, र तपाईंलाई पनि विश्वस्त पार्ने आशा गर्दछौं।
संक्षेपमा कालो मैट बाथरूम नलका फाइदाहरू:
Y स्टाइलिश कालो म्याट समाप्त
Finger औँलाको छाप छैन
For पैसाको लागि उत्तम मूल्य
Just केवल २० मिनेटमा आफैंबाट स्थापना गर्न सजिलो
SKU: 2320700B विभाग: बाथरूमको नल, एकल ह्यान्डल बाथरूम नल टैग: स्नानगृह सिंक नल, निकास विधानसभा, ईन्च सेंसेट
9.92 x 7.87 x 4.96 इन्च
लाइफ रड ड्रेन विधानसभा
एकल लीभर वाश बेसिन मिक्सर ट्याप क्रोम
वाह बाथरूम सेन्टरसेट नल क्रोम